Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland oo si adag u dheleeceeyay dhibaatooyinka ka dhanka ah haweenka – Kalfadhi
Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland oo si adag u dheleeceeyay dhibaatooyinka ka dhanka ah haweenka
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa si kulul u dhaleeceeyay falalka lidiga ku ah nabadgelyada hooyada iyo dhalaanka.
Khudbad uu ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 44raad ee golaha wakiillada ayuu gudoomiyuhu si adag ugu canbaareeyay falalka xadgudubyada iyo dhibaatooyinka loo geysto haweenka.
Wuxuu sheegay in dilalka iyo kufsiga loo geysto haweenka ay yihiin kuwa ka hor imaanaya diinta Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliya
Wuxuu ugu baaqay hay’adaha amniga iyo garsoorka in ay door wanaagsan ka ciyaaraan sidii meesha looga saari lahaa falalka noocaas ah ee soo noq noqday.
“Hay’adaha amniga iyo garsoorka waxaa waajib ku ah in ay caddaaladda la mariyo laguna fuliyo wixii ay mutaystaan cid kasta oo fal-dembiyeedyadaas gasha” ayuu yiri Dhoobo.
Bilihii Febraayo iyo Maarso waxaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe ee Puntland ka dhacay laba kiis oo kufsi iyo dil wada socda ah oo lagu kala kacay gabadh 12 jir ah iyo haweenay hooyo ah oo gurigeeda joogta.
Horraantii bishii hore ayaa maxkamad ku taal Garowe waxay dil toogasho ah ku xukuntay saddex qof oo lagu helay kiiska Caasho Ilyaas Aadan oo 12 jir ahayd, waxaana weli aan garsoorka hortegin kiiska kale oo lagula kacay hooyo gurigeeda joogta.
Kalfadhiga 44raad ee golaha wakiillada Puntland oo furmay iyo gudoonka oo aan ka hadlin hawlaha horyaal